Raysal Wasaaraha Turkiga Oo Booqday Muqdisho Iyo Jawaabta Dareenkiisa Ku Wajahan Xaalada Somalia | Araweelo News Network (Archive) -
Raysal Wasaaraha Turkiga Oo Booqday Muqdisho Iyo Jawaabta Dareenkiisa Ku Wajahan Xaalada Somalia
Muqdisho(ANN)Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa maanta booqday xero qoxoooti oo ku yalaa ee Magaalada Muqdisho, si suu ugu kuur galo xaalada dhabta ah ee ka jirta, iyadoo Ra’iisul Wasaaraha ay wehliso xaaskiisa, sadex caruur ah oo uu dhalay, masuuliyiin kale oo ka
tirsan dawladda, hay’addaha gargaarka ee dalkaa, suxufiyiin iyo dhakhaatiir.
Ra’iisal wasaare Erdogan waxaa Muqdisho ku soo dhoweeyay Madaxweynaha DKMG Soomaaliya ee taagta daran, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyo ra’iisal wasaaraha xukuumadda Prof. Cabdiweli Maxamed Cali.
Wafdiga Erdogan waxaa ka mid ah marwadiisa iyo saddex caruur ah oo uu dhalay, ra’iisal wasaare ku xigeenkiisa, wasiiro, xubno ka tirsan baarlamaanka, dhakhaatiir iyo fanaaniin.
Mr. Erdogan oo u kuur galaya xaaladda abaarta iyo macluusha dalka Soomaaliya, ayaa tegay xeryo ka mid ah xeryaha barakacayaasha la dejiyay ee magaalada Muqdisho, halkaas oo dadka qaarkii lacago kaash oo doollar ah, dhar iyo cunnooyin nafaqeysan uu gacantiisa ku guddoonsiiyay. Raysal Wasaaraha Turkiga oo shir jaraa’id qabtay markii uu booqday goobahaa ka dib ayaa sheegay inaanay dawladiisu waxba la hadhayn, wuxuuna sheegay in booqashadii uu ku tegey Daafuur xaaladii ka jirtay ay ka daran tahay ta ka taagan Somalia. sidaa awgeed ay dawladiisu cusbitaalo lagu qalabaynayo qalab casri ah iyo xarumo lagu quudiyo dadka dhibaataysan, isla markaana ay wax ka qabanayaan dhinaca Biyaha iyo wadooyinka. Wuxuuna balanqaaday inay si deg deg ah talaabooyin u qaadayaan.
mudadii uu joogay Raysal wasaaraha Turkiga magaalada Muqdisho ayaa amaanka aad loo adkeeyay, iyadoo ay ciidamo Turki ahi ilaalinayeen amaanka raysal wasaaraha, isla markaana saxaafada ku sugan magaalada Muqdisho ayaanay u suurta gelin inay si madaxbanaan u qaataan sawiro iyo wararka la xidhiidha goobaha uu booqday. sidoo kale Markab kuwa dagaalka ah ayaa taagnaa duleedka xeebta Magaalada Muqdsiho, kaas oo yimi halkaa ka hor intii aanu booqan. Dawladda Turkiga waxa ay ka mid tahay dalalka Soomaaliya soo gaadhsiiyay deeq loogu talagalay abaaraha iyo macaluusha ka taagan halkaa.
Dhinaca kale waxaa la filayaa inay qaar ka mid ah amiirada carabta, gaar ahaan kuwa Khaliijku booqdaan xarunta magaalada Muqdisho, kuwaas oo doonaya inay u kuur galaan xaalada dhabta ah ee ka jirta halkaa.